पण्डित सापकोटाको नवीन कर्मकाण्ड प्रकाश विमोचन | eAdarsha.com
पण्डित सापकोटाको नवीन कर्मकाण्ड प्रकाश विमोचन
पोखरा, ४ मंसिर। दिर्ग्दर्शक वाचन शिरोमणि पण्डित दीपक सापकोटाको नवीन कर्मकाण्ड प्रकाश नामक पुस्तकको सोमवार विमोचन भयो।
वैदिक कर्मकाण्ड सम्बन्धी उक्त पुस्तकको केदारेश्वर महादेवमणि सेवा आश्रमका पीठाधीश डा. लेखनाथ आचार्यले विमोचन गरेका थिए।
त्यस अवसरमा प्रमुख अतिथि आचार्यले भावी पुस्ताका लागि सुसंस्कार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कर्मकाण्डमा संकल्प र सामग्रीको महत्व रहने चर्चा गर्दै सानो त्रुटीले पनि मन्त्रको अर्थ अनर्थ हुने बताए।
सर्त्कर्मबाट नै जीवन सफल हुने उल्लेख गर्दै पण्डित दीपकले प्रकाशको लाभ पाठकले उठाउने छन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पुस्तकको समीक्षा गर्दै डा. जगन्नाथ रेग्मीले संकलनका दृष्टिकोणले पुस्तक उपयुक्त रहेको, जीवनपद्धतीलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरिएको र सरल रूपले बुझाउने प्रयास भएको तथा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
पण्डित दीपक सापकोटाले पुस्तक प्रकाशनमा धेरैबाट हौसला पाएको उल्लेख गर्दै लेख्न खोज्दाखोज्दै केही कुरा छुटेको बताए।
राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष जयलाल पुनले नेपाली जीवनपद्धतिको रूपमा रहेको सनातन हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण भइरहेको हुँदा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए।
नेपाल ज्योतिष परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी गुरुङले पुस्तक समाजोपयोगी भएको धारणा राखिन्।
विश्वहिन्दू महासंघ कास्कीका अध्यक्ष शंकर खरालले आफ्नो धर्मसंस्कृतिका बारे सबैले जान्न जरुरी रहेको बताए।
कार्यक्रममा चिसाखोला वेद विद्याश्रमका अध्यक्ष मोक्षनाथ तिमिल्सिनाले वैदिक संस्कार बारेको जानकारी महत्वपूर्ण रहेको बताए।
नेपाल ज्योतिष परिषद् कास्कीका पूर्व अध्यक्ष होमनाथ पोखरेलले पण्डित सापकोटा विद्यार्थीकालदेखि नै जिज्ञासु र लगनशील रहेको बताए।
राष्ट्रिय धर्मसभा कास्कीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद चापागाइँको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सम्पादक शिवदत्त रेग्मीले स्वागत तथा पं. रामप्रसाद सिग्देलले सञ्चालन गरेका थिए।
पुस्तकका प्रकाशक हेमन्त अधिकारी रहेका छन्।